Mpanamboatra kitapo marobe vita amin'ny tubular Double tubular | China Tubular Double Warp Bulk Bag Factory & Mpamatsy
1 taonina FIBC PP kitapo lehibe lava UV voadidy haingana fandefasana HT-2 tsara kalitao
Vovoka-porofo: voahosotra (10-35g / m²)
Endri-javatra: porofon-drano, porofon-drano ary vovoka
UV voatsabo: mahazatra mahazatra, fenitra hatry ny ela.
Kitapo marobe momba ny tubular Double HT-32
Ity famolavolana vatana vaovao ity dia mifanaraka tsara amin'ny fisafidianana fitaovana tsy misy liner sy hygroscopic. Izy io koa dia safidy tsara indrindra amin'ny fanamboarana kitapo efatra tontonana voalohany
Ny rafitra tubular dia manala ny valin'ny sisiny, amin'ny fanatsarana ny fitiliana sy ny fanoherana ny hamandoana. Ny fehin-kofehy Cross-Corner dia mety amin'ny fiasan'ny forklift.
Kitapo marobe tubular Double Warp HT-30
Ny fananganana tubular dia manala ny valin'ny sisiny, izay manatsara ny fanoherana ny sivana sy ny hamandoana. Ny blet an'ny famolavolana Cross-Corner dia mamela ny fidirana forklift mora.
Kitapo miampita zorony dia misy tadivavarana voaravaka amin'ny vatan'ny lamba lehibe, indraindray nasiana sosona fanamafisana lamba mitsangana. Rehefa lasa manan-danja ny endrika peratra fananganana dia ireo kitapo ireo no safidy voalohany. Ity famolavolana ity dia azo ampiasaina amin'ny lamina fanjairana rehetra, ny famolavolana fidirana / fivoahana ary ny safidy fanidiana isan-karazany.
Kitapo marobe momba ny tubular Double HT-29
Kitapo marobe momba ny tubular Double HT-51
Ity famolavolana vatana vaovao ity dia mety amin'ny safidy tsy misy liner amin'ny fitaovana tsara sy hygroscopic. Izy io koa dia safidy tsara indrindra amin'ny fanamboarana kitapo Four-Panel voalohany.
Kitapo masaka tubular dia vita amin'ny polypropylene izay tenona ho faribolana. Ny fitaovana boribory avy eo dia tapaka amin'ny halavany irina sy any ambany, ambony (raha voafaritra) ary ny tadiny dia nozairina tamin'ny vatan'ilay harona. Rehefa avy nahena ny habetsaky ny savony, ny kitapo boribory boribory matetika no safidy tsara indrindra misy vokatra lava vovoka na granular. Izy ireo koa dia mitazona tombony amin'ny departemantan'ny fampiasana mora foana satria hijoro irery ireo fehy.
Kitapo marobe momba ny tubular Double HT-50
Kitapo be fantsom-bokatra dia vita amin'ny lamba voatenona amina kofehy boribory, izay avy eo dia hokapaina halavana araka ny tokony ho izy ny haavon'ny kitapo voafaritra, amin'izay dia esorina ny tadiny mitsivalana amin'ny sisin'ny kitapo. Ny famolavolana vatana tubular dia mety ho safidy tsy misy liner amin'ny fitaovana tsara sy hygroscopic. Izy io koa dia safidy tsara indrindra amin'ny fananganana kitapo efatra voalohany.
Refy: sakan'ny 50cm ka hatramin'ny 260cm
Azo averina madiodio ny FIBC rehefa tapitra ny fiainany miasa, izay mahatonga azy io ho vokatra ara-tontolo iainana. Ny kitapo dia manana tadivavarana manandratra satria tsy misy palety na fonosana faharoa ilaina amin'ny fikirakirana. Izany dia manome tahiry be amin'ny sandan'ny fitaterana sy ny fitehirizana. Ny FIBC vita pirinty dia miasa ihany koa ho toy ny birao fanaovana dokambarotra finday mampiroborobo ny orinasa, marika ary mampiseho ny vokatra ilaina sy ny fikirakirana vaovao.
Kaontenera be antonony malefaka, malaza amin'ny anarana hoe Jumbo Bag, Big Bag na Bulk Bag dia fitoeran-javatra vita amin'ny polypropylene izay ampiasaina amin'ny fonosana betsaka hatramin'ny 500 kg ka hatramin'ny 5000 kgs. Izy io dia afaka mitondra in-1000 ny lanjany manokana. Ity endrika fonosana marobe ity dia ampiasaina hanangonana entana, fanafody, fanafody simika, zezika, simenitra ary vokatra maro hafa. Izy io dia azo namboarina mba hifanaraka amin'ny fampiharana samihafa satria ny kitapo voamarin'ny UN dia ampiasaina amin'ny fitaterana entana mampidi-doza, kitapo fanasivanana ho an'ny vovoka tsara ary koa ny kitapo ho an'ny fihenan'ny electrostatic mba hisorohana ny fipoahan'ny vovoka.